Traffic famantarana Pole mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole > Traffic famantarana pole > Traffic famantarana Pole
Fangatahana teknolojia fanamarihana fitaterana rodha sy lafiny teknika:1, fizotran'ny lasantsyNy vatan'ny rod iray manontolo dia tsy ho afaka amin'ny fikorontanana, famandrihana leakage, lavaka mitohy tsy an-kiato, undercut, sns. Ny lasantsy dia malefaka sy lemaka, tsy misy lesoka mihodinkodina ary ......
Fangatahana teknolojia fanamarihana fitaterana rodha sy lafiny teknika:
1, fizotran'ny lasantsy
Ny vatan'ny rod iray manontolo dia tsy ho afaka amin'ny fikorontanana, famandrihana leakage, lavaka mitohy tsy an-kiato, undercut, sns. Ny lasantsy dia malefaka sy lemaka, tsy misy lesoka mihodinkodina ary tsy misy fihenjanan-javatra, ary tsy maintsy misy ny fihenan'ny kapila.
2. Ny dingana anticorrosion antonony mafana
Manaraka fitsaboana mafana anatiny sy ivelany ivelany izy, ary ny halavan'ny 85um mifanaraka amin'ny fenitra GB-T13912-92. Ny fiainana ny serivisy famolavolana dia tokony ho latsaky ny 30 taona, ny mason-joron-tsarimihetsika dia malama sy tsara tarehy, ny loko dia mitovy, ny hoditra tsy azo vongana aorian'ny fitsirihana sniper, ary azo omena ny tatitra amin'ny fanandramana ny galvanisma.
3. Ny dingana manondraka
Ny fanaparitahana dia manamboatra vovobony polyester-purity ivelany, ny loko dia mety arakaraka ny takian'ny mpampiasa, ny fahamarinan'ny sosona plastika dia milamina, tsy malemy, tsy mihintsana. Famaranana mafy, mahery anti-UV, anti-ultraviolet, mety ho an'ny farihy sy faritra be sira. Namboarina ho an'ny fiainana serivisy tsy latsaky ny 30 taona, ny hatevin'ny 80um, mifanaraka amin'ny fenitra ASTM D3359-83. Manome tatitra momba ny fitsiriritana. Fepetra ilaina amin'ny fiarovana ny voaroy: ny hatevin'ny sarimihetsika dia tsy latsaky ny 120um, piraikitra matanjaka, tsy misy hoditra, tsy mianjera. Ny velarany dia malama ary ny mitovy loko ihany.
5, famoronan'ny rivotra sy ny fitaoman-drivotra
a. Araka ny fitakian'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra nifanomehezana, ny kajy ny herin'ny tsorakazo araka ny endrika endrika ny tehina maivana dia nomena.
b. Ny tanjaka sy ny firafitry ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vatany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly mifanandrify.
c. Asio tombo-kase sy manarona ny tampony amin'ny rivotra tsy voakasiky ny rano.
6, fitsapana fahatokisana
Aorian'ny fanajana ny tsangana mpanamboatra jiro, ampiasao ny theodolite mba hijerena ny maha-ara-dalàna ny elanelan'ny andry Ny maha-marim-pototra dia tokony ho latsaky ny roa arivo taona.
7, ny fahatsaran'ny vatana
Ny endriny sy ny habeny dia mahafeno ny fepetra takiana, tsara tarehy ny endriny amin'ny ankapobeny, ny sisin'ny rod dia milamina ary mitovitovy, ary mitovy ny loko. Ny sosona galvanized dia malama sy fisaka, ary ny sosona voapetraka dia manana adhesion mafy tsy matahoaka.
8. Ny barazy rehetra, ny voanjo, sns dia vita amin'ny vy vy (ankoatra ny vakana sy ny voanjo).
9. Ny alàlan'ny famandrihana tariby anatiny amin'ny paositra famantarana dia tsy miorina, mora kofehy ary tsy manana sisiny maranitra, burrs, nify ary ny toy izany mba hialana amin'ny fahasimbana amin'ny tariby.
10, ny andian-jiro dia mahafeno ny filan'ny tselatra sy ny filàna fanonerana, mari-pana 2 ambient: -15-50 degre Celsius; hafainganam-pandeha rivotra: 60ms; fanoherana ny herisetra: 8; hery fanoherana: 30 taona.
Hot Tags: Traffic famantarana Pole, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style